प्रत्यक्षमा १२० सिट र समानुपातिकमा ५० लाख भोट ल्यानुपर्नेछ – Khula kura
हामी नयाँ पार्टी जीवनतर्फ अगाडि बढ्दैछौं । अहिलेसम्म विधिवत् पार्टी एकता विभाजित छैन । हामी पार्टी विभाजन गर्न पनि चाहँदैनौं । निर्वाचन हुँदा पार्टी फुट्छ ? निर्वाचन हुँदा पार्टी फुट्नुपर्छ ? झन् एकजुट भएर बढ्नुपर्दैन ? मैले अस्तिको दिन प्रचण्डजीलाई भने- हामीले केही मिलाउन सकेनौं, अब निर्वाचनले मिलाउँछ कि ?
निर्वाचनमा त हामी एकजुट भएर जानुपर्‍यो । हाम्रो शक्ति एकजुट भएर निर्वाचनमा लगाउनुपर्‍यो । आपसी अन्तरविरोधहरु टुङ्ग्याउनुपर्‍यो । अब एकजुट भएर हामी निर्वाचनको काममा अगाडि बढौं । प्रधानमन्त्री बन्नु नै छ भने पनि चुनावबाट बन्ने होला नि त ? प्रधानमन्त्री म चुनावबाट बनेको हुँ । यसले हामीलाई एक ठाउँ पुर्‍याउँछ । अरू पार्टीहरु पनि सकेसम्म एकजुट हुँदैछन् । चुनावका लागि, चुनावको सामना गर्नका लागि ।
उहाँ (प्रचण्ड-माधव)हरू त मान्नुभएन । उहाँहरु बेग्लै संसारमा, बेग्लै सपनामा, कसले हालेको ब्याट्रीबाट चल्दै हुनुहुन्छ ? कसले दिएको पम्पबाट चल्दै हुनुहुन्छ ? मलाई थाहा छैन ।
तर उहाँहरु यस धर्तीमा, यस धर्तीको भूमिमा, यस धर्तीको जगमा, कार्यकर्ताको जगमा र जनताको विश्वासको जगमा चलिरहनुभएको छैन । अहिलेको आवश्यकताको जगमा उहाँहरु चलिरहनुभएको छैन । अहिले देश र जनताको चाहना परिपूर्ति गर्न उहाँहरु चलिरहनुभएको छैन ।
म प्रधानमन्त्री भएपछि नाकाबन्दीका विरुद्ध हामीले संविधान जारी गर्‍यौं । संविधान जारी गरेबापत हमला भयो । नाकाबन्दी हामीमाथि लगाइयो । नाकाबन्दीविरुद्ध हामीले डटेर सामना गर्‍यौं । त्यसबेला आलोचना र विरोध हामीविरुद्ध केन्द्रित गरियो । देश बर्बाद भयो, नसक्ने ठाउँमा सिङ जुधाउन गयो । छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध बिगार्‍यो…. हामीले सम्बन्ध बिगारेको थिएन ।
हामीले त नाकाबन्दी भोगिरहेका थियौं र त्यसका विरुद्ध भोको पेटमा सामना गरिरहेका थियौं । तर, पनि हाम्रो राष्ट्रको सम्मान, सार्वभौम सत्ताका लागि लड्दा देशभित्रै आलोचना गर्ने व्यक्ति थिए । हाम्रै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले एउटा व्यक्तिको दुर्बुद्धिको कारणले, बोल्न नजानेर देश नै अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति भयो, अब नेतृत्व फेर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक ढंगले बोलेर अभियान थाल्नुभयो ।
हाम्रा दुर्गम ठाउँहरु चीनसँग सिमाना जोडिएका छन् । त्यो दुर्गम ठाउँमा बाटा नबनाएर हामी देशको विकास कसरी गर्न सक्छौं ? त्यसकारण हामीले चीनसँग सम्बन्ध जोड्नैपर्थ्यो।
बाटाहरूले जोड्नैपर्थ्यो, हवाई सुविधाले जोड्नैपर्थ्यो। हिमालपार कनेक्टिभिटी सम्बन्ध, आवागमन, त्यो हवाई, दूरसञ्चार या अरू रेलमार्ग, अरू विभिन्न माध्यमबाट खोलौंं । त्यसो भएपछि हाम्राविरुद्ध यति तीव्र हमला भयो कि त्यो सरकार ढलाइछोड्यो ।
अब, एउटा परिस्थिति अहिले फेरि यहाँ आयो। हाम्रो देशको सम्पूर्ण भू-भाग सामेल गरेर नक्सा छाप्यौं । हामीले अरूको भूभाग सामेल गरेको होइन, हाम्रै भू-भाग सामेल गरेर नक्सा छाप्यौं ।
त्यो नक्सालाई नक्सा मात्रै छापेर, त्यो कुनै पोस्टर होइन। हामीले छापेको राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र भूगोल हो । त्यो भूगोल नक्साबाट समेत बाहिर पारिएको थियो । सुगौली सन्धिपछि हामीले १४६ वर्षसम्म भोगचलन गरेको जमिन, ५८ वर्ष अगाडि कालापानीमा भारतीय फौज बस्यो र त्यसभन्दा उताको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा (बाटामा फौज बसेर ब्लक गरिदिए पछि) उतैको जस्तो गरेर हट्यो ।
त्यसपछि यो संविधान संशोधन गरियो । सर्वसम्मतिले गरियो । संविधान बनाउँदा पनि सर्वसम्मत थिएन । कुनै पनि कुरामा, संविधानको मामलामा राष्ट्रिय सहमति अथवा राष्ट्रिय सर्वसम्मति अहिलेसम्म भएको थिएन ।
तर संविधानको प्रश्न र राष्ट्रलाई एक ठाउँमा उभ्याऔं । कतिको छातीमा ह्वार्ह्वारी आगो बल्यो । किन बलेको हो, थाहा छैन ।
एउटा समूह पृथकतावादी राजनीति लिएर हिँडिरहेको थियो । त्यस समूहलाई हामीले संविधानसम्मत राजनीतिक संवैधानिक, शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा, राष्ट्रिय एकताको मूलधारमा ल्याउन सफलता प्राप्त गर्‍यौं ।
त्यसबेला पनि विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो । यो के षड्यन्त्र हो, त्यस्तालाई किन मञ्च दिइयो ? आदि इत्यादि । एउटा पृथकतावादी राजनीतिको अन्त्य गरेर राष्ट्रिय मूलधारको राजनीति अगाडि बढ्दैछ भने त्यसमा मन पोल्नुपर्ने कारण के ? कलेजो जल्नुपर्ने कारण के ? तर, केही मान्छेहरुको मन जल्यो । पृथकतावादको अन्त्य हुँदा रुवाबासी गरे केही मान्छेहरु ।
हामी देख्न सक्छौं, यसभित्र के होला ? हामी बुझ्न सक्छौं, यसभित्र के होला ? यतिबेला त्यसैकारण हाम्राविरुद्ध तीव्र हमला छ । हाम्रा एकजना पार्टीका वरिष्ठ नेताले टेलिभिजनमै भनेको सुनियो, भ्रम नरहोस्, म एकताको विरोधमा थिइनँ ।
यो एकता गरेपछि एकता गरेको समूहसँग मिलेर केपी ओलीलाई हटाउन सकिन्छ भनेर एकताको पक्षमा थिएँ म । एकताको एकदम पक्षमा थिएँ, किनभने त्यो समूहसँग मिलेर केपी ओलीलाई हटाउन सकिन्छ । अथवा एकता चाहिएको किन रहेछ ? कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन होइन ।
प्रचण्डले पार्टीबाट निकाल्छन् कि, कहाँकहाँबाट निकाल्छन् कि, घरबाट पनि निकाल्छन् कि त्यो उनको कुरा हो । हामी एउटा आन्दोलनमा छौं, हामीले हाम्रा महान उद्देश्यहरु तोकेका छौं । हामी समाजवादमा पुग्न चाहन्छौं । त्यसकारण अहिले समाजवादउन्मुख छौं । समाजवाद उन्मुख भनेको लोककल्याणकारी राज्यका अवधारणाअनुसार काम गर्दै सामाजिक न्याय र समानता, सुशासनको बाटोमा अगाडि बढेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने ।
हामी यस उद्देश्यतर्फ अगाडि बढिरहेका छौं । त्यस उद्देश्यका निम्ति हामीले एउटा सशक्त आन्दोलन निर्माण गर्नुपर्छ । त्यो आन्दोलन निर्माण, सञ्चालन र ठीक ढंगले अगाडि बढाउन हामीसँग एउटा सशक्त पार्टी चाहिन्छ । त्यो सशक्त पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ, अघि मैले भनेको सही विचारहरु मार्क्सवादी दर्शन, मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्त, दर्शन र हामीले लिएको गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्ने मार्गचित्र, त्यसका कार्यक्रम, योजनाका साथ अगाडि बढ्छौं । त्यस्तो गर्नका लागि हामीलाई सशक्त मजबुत, एकताबद्ध र गतिशील पार्टी चाहिन्छ । त्यस्तो पार्टी निर्माणको नयाँ चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौं ।
कमरेडहरुलाई लाग्ला, केही साथीहरु त आएनन् । त्यस्तो हुन्छ आन्दोलनमा । हुँदोरहेछ । हामीले नचाहेको, भरसक सबै साथीहरुलाई अगाडि लिएर बढौं भन्ने सोचेको । तर, उहाँहरु प्रधानमन्त्री पनि वामपन्थी देख्नै नसक्ने । उहाँहरुको राजनीतिक दृष्टिकोण छैन । वर्गीय दृष्टिकोण छैन । आन्दोलनको दृष्टिकोण छैन । आफ्नो पद, आफ्नो लाभ, आफ्नो हित मात्र छ ।
अघिल्लोपटक मैले नेतृत्व गरेको सरकार ढलाउनु किन पर्‍यो ? उहाँहरुसँग जवाफ छ ? उहाँहरुसँग कुनै जवाफ हुन सक्दैन । अहिले आएर उहाँहरु भन्नुहुन्छ, अघिल्लो सरकार लोकप्रिय थियो । लोकप्रिय थियो भने ढालेको किन त ? उहाँहरु नै हो ढाल्ने । अलिपछि उहाँहरु भन्नुहुन्छ, अहिलेको सरकार लोकप्रिय छ, त्यतिबेलाको चाहिँ भएन ।
पार्टी चल्न सक्ने अवस्थामा थिएन कमरेडहरु । हामीले चाहेर के गर्ने ? अहिले पनि चाहेका छौं । उहाँहरुले जस्तो कसैलाई निस्काशन गरेर कुदिरहेका छैनौं । उहाँहरु यति उपद्रो गर्दै हुनुहुन्छ, यति अन्तरघात गर्दै हुनुहुन्छ, वामपन्थी आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै बिग्रहको खेती गरिरहनुभएको छ । तर, पनि हामी कसैलाई निकालिरहेका छैनौं ।
आफैं उहाँहरु किनारा लाग्दै हुनुहुन्छ । त्रिशूलीमा तपाईंहरुले हेर्नुभएको होला, केही केही चिज नदीमा पर्‍यो भने त्यो बग्दै जाँदा किनारा किनारातिर लाग्छ । नदी बग्दै जाँदा फोहोरहरु किनारातिर धकेलिँदै जान्छ र सफा हुँदै अगाडि जान्छ ।
पार्टीमा तपाईंहरू कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, एकता गरेपछि कमिटीहरुले काम गर्न पाए ? तपाईंहरुले काम गर्न पाउनुभयो ? तपाईंहरुले गतिका साथ अगाडि बढ्न पाउनुभयो ? विभिन्न बाहनामा तपाईंहरुले खुट्टे लगाउने काम भयो ।
गाईगोरुलाई लगाइन्छ नि, त्यस्तै झुण्ड्याउने काम भयो । जनताका बीचमा स्पष्ट राजनीति लिएर जान नपाउने, संगठन एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न नपाउने गतिविधि भयो ।
भुइँचालो जाँदा हामीले कार्यकर्ता परिचालन गर्ने । अरु पनि पार्टी हुँदा त्यसबेलाको सरकारले पनि केही पनि गर्न सकेन । तर हामीले हाम्रो कार्यकर्ता पङ्क्ति परिचालन गरेर आफैं एक कप चिया पनि खान नपाउने नियमका साथ बढो अनुशासित ढंगले एक महिनाको अभियान चलायौं । २७ हजार २ सय ७६ वटा अस्थायी टहरा बनाएर हामीले जनतालाई हस्तान्तरण गर्यौं । धेरै स्कुल भनौं न, लगभग १३ हजार विद्यालयहरु निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्यौं । २२ हजार हामीले भग्नावेशहरु सफा गर्ने काम गर्‍यौं ।
जनतालाई अप्ठ्यारो परेका बेला ती कामहरु पार्टीले गर्न सक्छ । त्यस्ता राहतको काम गर्न सक्छ । तर अहिले पार्टी यत्रो कोभिड १९ को बिगबिगी छ, पार्टी केही गर्न सक्दैन । केही गर्न सक्ने अवस्थामा, कार्यकर्ता परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा पार्टी छैन । विरोध मात्रै गर्न सक्ने जस्ता विभिन्न प्रचारवाजीमा । टेलिभिजनमा गयो सरकारको गाली गर्ने । पत्रपत्रिकामा गयो सरकारको गाली गर्ने । रेडियोमा अन्तर्वार्ता दियो सरकारको गाली गर्ने । यसैमा समय खर्च गरिरहेको छ ।
हाम्रो अभियान कुन हिसाबले हामी सञ्चालन गर्न सक्छौं, हाम्रो सफलता त्यसमा निर्भर रहन्छ । हामी एउटा आँधी तुफानका रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाएर लिएर जाँदैछौं । आँधी तुफानका रूपमा हाँकेर लिएर जाँदैछौं ।
हामी राजनीतिमा सम्पूर्ण ढंगले समर्पित भएर काम गर्छौं । हामी सही विचारको, सही उद्देश्यको तागत दुनियाँलाई देखाउँछौं । हामी हाम्रो एकताको बलको, एकताबद्ध सक्रियताको तागत देखाउँछौं । हाम्रो व्यापक पार्टी पङ्क्तिको परिचालन, त्यसको तागत देखाउँछौं । हामी त्यसैगरी जनपरिचालन गर्छौं । त्यसको तागत हामी देखाउँछौं ।
देशभक्तिमा के तागत हुन्छ ? राष्ट्रवादमा के तागत हुन्छ ? राष्ट्रिय स्वाभिमानमा के तागत हुन्छ ? त्यो हामी देखाउँछौं । हाम्रो स्वच्छता कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मूलन गर्ने हाम्रा इमान्दार उद्देश्यहरुको तागत र सुशासन, शान्ति कायम गर्ने हाम्रा नीति र व्यवहारको तागत के हुन्छ, हामी देखाउँछौं ।
यस्तो काम सञ्चालन गर्न हामीसँग सशक्त, विचारमा स्पष्ट र गतिशील पार्टी चाहिन्छ । त्यसर्थ मैले केन्द्रीय कमिटीमा केही साथीहरु थप गरेको छु । आन्दोलन टुक्राटुक्रामा विभाजित भएको अवस्थाबाट एकता, एकीकरण र पार्टी निर्माणको एउटा अभियान, आन्दोलन सञ्चालन गर्दै यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएको नेता, पार्टीको प्रथम अध्यक्ष र जनताले विश्वास गरेको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ।
त्यो अध्यक्षको हैसियत हो, जसमाथि जनताले विश्वास गरेर अभिभारा सुम्पिएका छन् र त्यो अभिभारा असफल हुन दिनुभएको छैन ।
अब यसपछिको परिस्थितिको हामीले कसरी सामना गर्ने ? उनीहरुले निहुँ त अगाडिदेखि खोजिरहेकै थिए, अब झन् उनीहरुले निहुँ बनाउँछन् । त्यो निहुँ बनाएर पार्टी विभाजन गर्न खोजिरहेका छन् र प्रयास गरिरहेका छन् ।
परामर्श पनि नगरेर अध्यक्षलाई निष्काशन गर्ने आदि इत्यादि गरिरहेका छन् । महाधिवेशन गर्नुपर्ने, गरिरहेका छैनन् । त्यतापटि्ट लागिराखेका छैनन् । त्यसैले आगामी अभिभाराहरू पूरा गर्न सक्ने गरी कमिटीलाई थपेर विस्तार, अर्को भाषामा भन्ने हो भने पुनर्गठन गरेर विस्तार हो यो ।
मैले बुँदामा टिपेर ल्याएको छु, कमडेरहरूलाई पनि काम लाग्छ । एउटा त अहिलेका कमिटीहरु निर्वाचित होइनन्, यी कमिटीहरु मनोनित हुन् । महाधिवेशनबाट निर्वाचित होइनन् । कुनै कमिटी पनि होइनन् । सबै मनोनित हुन् ।
यथार्थमा मौजुदा कमिटीहरु पनि यसै प्रक्रियाबाट, जसरी मैले हिजो साथीहरु थप गरेँ, त्यस उद्देश्यका लागि मैले ४४१ केन्द्रीय कमिटी, २ जना आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य र ४ जना पछि थपियो । ४४७ जना पहिले केन्द्रीय सदस्य र ५५६ जना मैले हिजो मनोनयन गरेका केन्द्रीय सदस्य गरेर १००३ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनेको छ । १९६ जना खाली राखेर ११९९ जनाको कमिटी बनाइएको छ । यो कमिटी पछि हेरफेर हुन्छ ।
भइरहेका कमिटीबाट एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्न र एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्न पनि सम्भव छैन । यी कमिटीहरूको कार्यविधि सहमतिको बाटोबाट कार्यसम्पादन गर्ने भन्ने छ । तर यिनले कहिल्यै सहमतिको बाटो समातेनन् । समात्न सफल भएनन् । बरु झमेला सिर्जना गर्ने तत्वहरूको चंगुलमै कमिटीहरू फसिरहे ।
केही तत्वले समस्या सिर्जना गर्ने र त्यही समस्यामै कमिटीहरू रुमलिने भइरह्यो । त्यो समस्यालाई छिचोलेर अगाडि जान नसक्ने भयो । त्यो विवशताबाट कमिटीलाई मुक्त गर्नका लागि संख्या थप्नुपर्‍यो ।
लाई अविलम्व रोक्न आवश्यक परेको छ ।